Sidee Finland looga heli karaa megengelyo? - Asylum in Finland
Megangelyo waad ka codsan kartaa Finland haddii aad heysato sababo cad oo aad uga cabsaneyso in laguugu cadaadiyo dalkaada hooyo ama dalka aad sida rasmiga ah u deggan tahay.
Marka aad codsaneyso megangelyo waa in aad u soo safartaa Finland islamarkaasna aad si shaqsi ah u ogeysiisaa ilaalada xuduudaha ama booliska in aad megangelyo codsaneysobooliska in aad megangelyo codsaneyso. Megangelyo kama codsan kartid safaaradda Finland ee dibadda ku taal, sidoo kale kuma codsan kartid warqad aad Finland dibadda uga soo dirtay ama emayl.
Megangelyo, darajo qaxooti
Waxaa Finland lagaa siin karaa megangelyo, derajada qaxootiga haddii aad uga soo tagtay wadankaadi hooyo ama wadankii aad sida rasmiga ah u deganeyd sababo cad oo aad uga cabsaneyso in halkaas laguugu cadaadiyo. Sababaha cadaadisku waxa ay noqonayaan
ka mid ahaanshaha koox bulsheed cayiman
Waxaa kale oo lagaa doonayaa in cabsidaada darteed aadan u dooneyn in aad maciinsato badbaadada dowladda dalka laga hadlayo.
Tusaale ahaan cadaadinta dumarka jinsi ahaan loo geysto waxaa loo aqbali karaa sababo megangelyo lagu bixiyo. Markaas sababta cadaadintu waa ka mid ahaanshaha koox bulsheed cayiman.
Sharciga ajnabiga ee Finland shuruudaha ku qoran ee lagu bixiyo megangelyadu waxey la mid yihiin kuwa ku qoran heshiiska Geneva oo ay Finland qowlqaaday.
Ogolaansha degitaanka ee ku saleysan badbaadinta derajada labaad ama sababo kale
Marka xal laga gaarayo codsigaada megangelyada, Hay’adda Socdaalku waxey baareysaa in sababo kale laguugu siin karo ogolaanshaha degitaanka, haddii aadan Finland ka helin megangelyo. Ogolaanshaha degitaanka ee ku saleysan badbaadinta derajada labaad waxaa lagu siin karaa haddii dalkaada hooyo ama dalka aad sida rasmiga ah u deganeyd ay kugula dhaceyso
wax kale oo dhaawacaya qiimaha qofka ama wax aan babi’aadminimo aheyn.
Derajada badbaadinta heerka labaad waxaa sidoo kale lagu siin karaa haddii aadan ku laaban karin dalkaada hooyo ama dalka aad sida rasmiga ah u deggan tahay adigoo aan ka baaqsaneyn in aad ku dhacdo halis shaqsi ah dagaal hub loo adeegsanayo oo halkaas ka jira dartiis.
Hay’adda socdaalku waxey islamarkaas baareysaa in aad sababo ku heli karto ogolaanshaha degitaanka, sida
ka bixista dalka oo aan suurtageli karin darteed
sababo bani’aadminimo oo gaar ah
dhibane ka ganacsiga dadka.
Ogolaanshaha degitaanka waxaa sidoo kale lagu siin karaa haddii aad heysato shaqo, waxbarasho ama xubin qoyskaada ka tirsan ay Finland joogto. Markaasna waa in aad heysataa baasaboor, waana in aad sameysaa codsiga ogolaanshaha degitaanka oo gaar ah islamarkaasna bixisaa lacagta looga baaraandegayo codsiga. Xaalado gaar ah haddii ay jiraan oo kaliya ayaa la siin karaa ogolaanshaha degitaanka qofka aan baasaboor heysan.
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka